The Best Cities In Europe For Vegetarians | Save A Train
musha > Travel Europe > The Best Cities In Europe For Vegetarians
Mazita maguta yakanakisisa muEurope pamusana vegetarians ari kutanga pakupedzisira kuwana yakareba. Zvingave kunge zvishoma kunonoka kuti achienda asi miriwo scene is finally taking off. Tose tinoziva kuti nyama-centric midziyo zvakazadza menu munyika dzakawanda dzeEurope. Asi zvinhu zvachinja. mazuva ano, haufaniri kuenda nzara kana uri parwendo miriwo. Kana iwe kuti tigutse zvido chete pachako.
Heano mamwe Maguta yakanakisisa mu Europe nokuda vegetarians uye sei kuti ikoko nechitima.
maguta Best mu Europe nokuda vegetarians: Berlin, Jerimani
chokwadi, kuenda nyama isina ane zvimwe zvakawanda dzokutsigira nyika restauranteers swoling pa pfungwa, asi nokuda maresitorendi kuti vakagamuchira izvozvo, tinotora heti zvedu kure kwamuri! Berlin zvino anopa Zvaifadza siyana miriwo Restaurants. Tiri kutaura kueche aizikirimu kune chaizvo veggie burgers. Most miriwo Restaurants in Berlin ari yepamusoro uyewo nakisa trendy. Berlin akanga kunyange zita The New Vegetarian Capital wenyika kubudikidza SaveuR mu 2015. Uye kunyange kupfuura chinyakare Restaurants, pane nzira yakakodzera veggie pavanokarira pakati pedu.
maguta Best mu Europe nokuda vegetarians: Barcelona, Speini
We zvakakwana rudo Bhattacharjee uye kuti akagamuchira Vegetarian uye kueche chikafu! Barcelona, zvikuru sei, ndiko saka dzakapinza kuti kugamuchira, izvozvo akazivisa pacharo 'veg-ushamwari, shamwari kueche uye miriwo tsika 'mu Kurume 2017. City Hall kunyange yakabereka yayo miriwo mutungamiriri muguta uye kwakurudzira vaigara ayo kuedza kubva nyama isina weMuvhuro. Senzvimbo dzakawanda, uchawana kongiri nyore veg-ushamwari nzvimbo uye evasingatombonamati kueche mumaresitorendi akafanana BioBento uye zvakakodzera ainzi veggie Garden. Cake anoda? Ipapo iwe unofanira kushanyira Santoni Cafe, iyo inoshanda kueche Pizza, kueche muffinit, uye kueche croissants, nezvimwe zvinonaka inobata.
maguta Best mu Europe nokuda vegetarians: Stockholm, Siwidheni
Kana uri kutsvaka yakanaka dzokudyira miriwo-yokufamba zvino tarisa mberi pane Stockholm. This popular Scandinavian city definitely makes our list for The yakanakisisa maguta Europe nokuda vegetarians. Zvinonyaradzawo nakisa nyore kusvika nechitima! Mumwe miriwo resitorendi kwete kusuwa: Vakawanda vanofunga Hermans (www.hermans.se) ndiyo yakanakisisa miriwo resitorendi muEurope. Ivo kupa zvose-iwe-unogona-kudya miriwo retafura ane incredible maonero guta.
maguta Best mu Europe nokuda vegetarians: London, England
Achishamisika? Hatina kufunga kudaro! London chaizvoizvo ane zvose! Kusanganisira zvinoshamisa huwandu kueche nzira. Sohõ Anozvirumbidza nyika yokutanga zvose-veg bhawa - The Coach & Horses ndiye London kwakaita (uye pamwe neEngland) inozivikanwa miriwo resitorendi. Rinopa kueche uye veggie slants pamusoro British bhawa Classics. Kana uri kunzwa zvarisingazivi ipapo Vanilla Black ndipo uchifanira kuva! Tinoratidza kuti to iced yekotapeya ane muvhuruvhuru omuorivhi Jerusarema artichoke cake Brazil Nut mukaka uye makabheji. Sounds kuedza munhu, kwete vegetarians.
maguta Best mu Europe nokuda vegetarians: Glasgow, Scotland
Glasgow – Chiregera chete miriwo, ndicho chimwe nyika dzakawanda maguta kueche-ushamwari, uye kuramba mahombekombe panopinda zvose miriwo.
Zvinoita sokuti pane veggie itsva kana kueche hotspot buri vanenge pavhiki, uye kudiwa zviri zvachose ikoko. Nguva pashure nguva yave zvokusarudzwa iri kueche-ushamwari zvikuru nzvimbo muUK. VegFest (pakukura kueche mutambo muEurope) uyewo akawedzera Glasgow wayo Roster.
Pane pasina nguva kupfuura zvino bhuku chitima rwokuToronto zvapo Europe ne SaveaTrain kana uri miriwo kana kueche!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-europe-vegetarians%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / of to / ja kana / kes uye mimwe mitauro.
#healthyFood #Travelhealthy #Vegan #Vegetarian chikafu Foodie longtrainjourneys chitima mazano Train Travel
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Travel Europe